အစာရှောင်ခြင်းပို့ဆောင်မှု:5နာရီအတွင်းအောင်ရှေ့ပြေးပုံစံ
မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်: ကိုးကား 24 နာရီအတွင်းကိုကမ်းလှမ်းခြင်းနှင့်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုမဆိုအချိန်အတွက်ထောက်ပံ့ပေးလျက်ရှိသည်
စက်ရုံ, သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကုန်ကျစရိတ်အနီးအနားမှာ port ကိုသိမ်းဆည်းနေသည်
2000 ကတည်းကရှန်ကျန်း HZD နည်းပညာ Co. , Ltd သည်ကမ္ဘာ့တစ်လျှောက်လုံးထုတ်လုပ်မှု, သုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို client များအပါအဝင်တိကျ CNC စက်န်ဆောင်မှုများပေးလျက်ရှိသည်။ ကျနော်တို့ပြဿနာကျွမ်းကျင်မှုဖြေရှင်းရေးနှင့်အခက်ခဲဆုံးစီမံကိန်းများနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့ clients များကူညီပေးနေ, ဒီဇိုင်း, အချိန်ပေးပို့အပေါ်, အရည်အသွေးများအတွက်ဂုဏ်သတင်းရှိသည်။ ကျနော်တို့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး, Automation, Alternative Engergy, လေကြောင်း, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနှင့်ပါဝါအလွှဲအပြောင်းစက်မှုလုပ်ငန်းမှ CNC စက်အစိတ်အပိုင်းများနှင့်ရှေ့ပြေးပုံစံသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်များ၏နှစ်ပတ်လည် output ကိုကျော်ကို 80% လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ထံမှကြီးမားသောကုမ္ပဏီများအားထောက်ပံ့ပေးခဲ့ကြသည်, သန်း 20 ကျော်ကအမေရိကန်ဒေါ်လာဖြစ်ပါတယ်။
1. ပစ္စည်းရွေးချယ်စရာ: Al6063, 6065, 7075, စသည်တို့ .;
2. က Surface ကုသမှု: ဓာတ်တိုး, sandblasting;
RoHS သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးလိုအပ်ချက်များနှင့်အညီ 3. ;
ဆက်သွယ်ရေးရှေ့ panel က
ရှန်ကျန်း HZD နည်းပညာ Co. , Ltd မှ
လိပ်စာ: အမှတ် 76, Langbei စက်မှုဇုံ, Tongle အဝန်း, Longgang လမ်း, Longgang ခရိုင်, ရှန်ကျန်း